Indlu yase-Casa Karibu ebhishi enokubukwa kolwandle okungu-180 degrees - I-Airbnb
Indlu yase-Casa Karibu ebhishi enokubukwa kolwandle okungu-180 degrees
Machangulo, Cidade de Machangulo, i-Mozambique
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Laurie And Clive
I-Self catering indlu yasebhishi enesitezi esiphindwe kabili enokubukwa kolwandle okuhle kakhulu
Wonke amagumbi aneminyango ephindwe kabili evuleleka kumadekhi amakhulu amboziwe anokubukwa kolwandle okudonsa umoya
Impilo yezinyoni ekhiqizayo - umsindo ohlale ukhona wokuntweza - kunjalo
izulu kubathandi bemvelo!
Indawo ekahle yeholide yemindeni namaqembu abangani.
Ipharadesi lasogwini elinokuthula ukuze uphumule futhi ubuyisele umphefumulo wakho.
Gwema traffic nezingozi zamaphoyisa. Woza ngesikebhe noma
shayela nakuba iMaputo Special Reserve - imoto engu-4 x 4 ibalulekile.
I-Casa Karibu iyipharadesi
Indlu yeholide eyimfihlo etholakala eNhlonhlweni enhle yase-Santa Maria e-Mozambique. Ibekwe kahle kwenye yezindawo ezingaphambili zechweba, ukubukwa kwesiqhingi sase-Inhaca, izibani ezicwayizayo zakusihlwa zaseMaputo kanye nokushona kwelanga okukhazimulayo okusawolintshi okumangalisayo.
Indawo yokuhlala e-Casa Karibu inamakamelo okulala angu-4 akhethekile futhi anomoya - wonke anokubukwa kolwandle futhi aklanywe kahle ngemibala epholile yasehlobo. Indawo yokuhlala ihlanganisa ikhishi lepulani elivulekile elinekhawunta yesevisi eya emphemeni kanye negumbi lokuphumula elinosofa abakhulu abantofontofo.
Izilayidi zengilazi ezinde ziholela endaweni enkulukazi enokubukwa okudonsa umoya kanye nechibi elikhulu elicwebezelayo elisendaweni ephansi, phakathi kwezihlahla zasendulo zeMilkwood kanye nehlathi lendunduma eliluhlaza.
Kulala abantu abangu-8- 10 sebebonke, igumbi lokulala elikhulu elinombhede wenkosi yi-en-suite futhi litholakala phezulu kanye nehhovisi elinombhede osayizi wendlovukazi. Igumbi lokulala lesi-2 nelesi-3 akhiwe phansi futhi ahlanganyela negumbi lokugezela.
I-Casa Karibu inokufinyelela okuqondile emabhishi acwebile, angasese azungezwe amanzi aphephile nafudumele echweba elinolwandle. Indawo ekahle ngempela yemindeni kanye namaqembu abangani afuna iholide lolwandle elizolile, umoya othatha indawo ezungezile kusukela kuntofontofo yendlu yasebhishi emangalisayo ngempela.
Indlu inikeza inkundla yokudlala yemisebenzi!
Amanani asekelwe ekutheni bangaki abantu nokuthi uzohlala isikhathi esingakanani.
Silala abantu abangu-8 ngokukhululeka.
abantu abengeziwe abangu-2 bangahlaliswa ngentengo engu-USD60/umuntu/ubusuku okwenza inani eliphelele labantu abasendlini libe yi-10.
4.93 · 32 okushiwo abanye
I-Casa Karibu eseSanta Maria isendaweni enhle, engonakalisiwe yasolwandle uhambo lwehora elingu-1 ngesikebhe ukusuka eMaputo.
Ulindelwe amabhishi ahlanzekile anesihlabathi esihlanzekile esithambile. Ulwandle oluluhlaza ukumema ukuthi ungene futhi udlale amagagasi akhe.
Buka izinkalankala ze-hermit namanye ama-crustaceans egijima onqenqemeni lwamanzi.
Impilo yezinyoni eningi, ukubukwa okuhle kulo lonke itheku, ukubhukuda okuphephile, imisebenzi yangaphandle kanye nendlu enethezekile kwenza ukuhlala kwakho kukhumbuleke.
Akukho siminyaminya noma amaphoyisa omgwaqo anyanyekayo akuhlukumezayo.
Nethezeka futhi ubuke isigqi sokuza nokuhamba kwamagagasi.
Lalela izingoma zomsakazo we-LM, noma ulalele imisindo yolwandle - ingoma edlalwa phakade.
Ulwandle, izingcingo zama-seagull, i-touraco, ama-kingfisher nezinye izilwane zezinyoni, zikubizela kubathandi bemvelo ipharadesi.
Ibungazwe ngu-Laurie And Clive
Sisendaweni ukuze sikusize futhi sikuqondise kukho konke ukuhlala kwakho.
Siyakuqondisa emisebenzini futhi sincoma uhambo olunabasebenzisi abathembekile. Ukuthi izivakashi zikhokha amanani afanelekile.
U-Laurie uzobhukha esikhundleni sakho ukuze aqinisekise ukuthi abahlinzeki besevisi abathembekile bayakhethwa futhi kukhokhwa amanani afanelekile.
Siyakuqondisa ngamanani omkhiqizo okungukuthi yini okufanele uyikhokhele izinkalankala, uhambo lwamatekisi/amachapa/ama-dhow oluvela kubantu bendawo.
Jabulela i-massage ephumuzayo emphemeni, hamba ubukele imikhomo - konke lokhu kuhlelwe ngabanikazi.
Uma ugesi ucisha noma ezinye izinkinga ezinjalo zenzeka, sikhona ukuze sithole amajeneretha azokwenza ukhululeke.
Siyakuqondisa emisebenzini futhi sincoma uhambo olunabasebenzisi abathembekile. Ukuthi izivakas…